Gaalkacyo oo laga hir-gelinayo Garsoor ciidan oo ka madax banana Maamulada Galmudug iyo Puntland…. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gaalkacyo oo laga hir-gelinayo Garsoor ciidan oo ka madax banana...
Gaalkacyo oo laga hir-gelinayo Garsoor ciidan oo ka madax banana Maamulada Galmudug iyo Puntland….
Wafdi uu hugaaminayo taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehliyeen, xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deeganadaasi, Saraakiil ka tirsan Wasaaradda gaashaandhigga iyo masuuliyiinta Maxkamadd Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed ayaa u joogo Magaalada Gaalkacyo dhameystirka dadaalka nabadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka waddo magaaladaasi.
Ciidama ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka madax baxnaan Qeybaha 21-aad iyo 54-aad ee ka howlgala Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa lagu wareejiyay amniga magaalada iyagoo wixii ay u baahdaan ee deeg ah eey ka heli doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana eey hadda heleen gunnooyin iyo agab ciidan oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku wareejisay sida uu u sheegay SNV G/sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha Maxkamadda D.1-aad ee Ciidmada Qalabka Sida.
Previous articleQM oo ugu baaqday Maamulada Somaliland iyo Puntland in ay ka wada hadlaan xasaradaha ka jira Gobalka Sool.
Next articleGalmudug Oo U Diyaarsan Soo Dhaweynta Madaxweynaha Dalka.